carpet အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ဈေးနှုန်းသင့်တဲ့ carpet tile နှင့်
Hotel ဆောက်လုပ်နေဆဲ လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်လည်း
hotel သုံး carpet အလိပ်များကိုလည်း ဈေးနှုန်းချိုသာစွာရောင်းချပေးနေပါသည်။
promotion ဈေး ပါဗျို့ ...
၁ကျင်းကို ( 160000 ks ) တည်းဖြင့် promotion ဈေးဖြင့် ရောင်းချပေးသွားပါမည်။
၁ကျင်း 38pcs ကုန်ကျမှာဖြစ်ပြီး ၁ချပ်ကို ၄၂၀၀ သာကျသင့်မည်။
( carpet tile ၏ အားသာချက်များ )
1. ၁ပေခွဲ အချပ်များဖြစ်ပြီး ၁ချပ်ခြင်းစီ လိုသလောက် ခင်းလို့ရခြင်း နှင့် ခင်းရ လွယ်ကူခြင်း ။
2. နိုင်လွန်သားဖြစ်ပြီး ရေရှော် ခံနိုင်ပြီး အရောင်မလွင့်ခြင်း . သန့်ရှင်းရေး လုပ်ရလွယ်ကူခြင်း ။
3. အမှတ်မထင် ညစ်ပတ်သွားပါက ကော်ဇော အချပ်ကြီးများကဲ့သို့ အဆင်မပြေခြင်းများမရှိပဲ ပေကျံ့သည့် အချပ်ကို အလွယ်တကူ ခွာ၍ လဲနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးကျောနိုင်ခြင်း ။
4. ကော်သုံးစရာ မလိုအောင် အောက်ခင်းမှာ PVC ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး အလွယ်တကူပြောရရင် သရေအဖတ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ကော်မလိုပဲ မရွေ့ခြင်း , မပြေးခြင်း စသည့် ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ ကွာလတီ မျိုးကို ( ကိုရီယား ပါကေး ဈေးထက်သက်သာပြီး ) ချိုသာသော ဈေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချပေးနေပါသည်။
5. ခင်းကျင်းရန် အတွက် ညီညာသော ကြမ်းခင်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ ခင်ဗျာ .
*** ဘုရားခန်း , ဧည့်ခန်း , ရုံးခန်း နှင့် အခြား နေရာများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ***
phone . 09261936081 , 09795911598
Decho carpet & hotel materials Co,ltd